Mariin mummicha ministeeraa Sudaan Abdalla Haamdook fi hogganoota garee fonqoolcha mootummaa Onkolooleessa 25 gaggeessan giddutti gaggeefame foyya’iinsa agarsisuun isaa ibsamee jira.
Kunis Yunaaytid Isteetsii fi Tokkummaan Mootummootaa furmaanni akka argamuuf dhiibbaa taasisaa jiraniin ta’u maddeen Haamdookitti dhiyeenya qaban Kamiisa kaleessaa beeksisanii jiru.
Maddii lammataa akka jedhutti immo, Sudaan kaawunsilii biyya gaggeessuu kan miseensoota haaraa 14 qabu waraannii ijaaruu malaa.Kunis mootummaa ce’umsaa hundeessuuf akka ta’uutti tarkaanfii duraa ta’a jedhamee jira.
Dhyeenya kana addunyaan dhiibbaan gochaa jiru dabaluu isaaf mallattoon, barreessaa dureen Tokkummaa Mootummootaa Antoniyoo Gutarrees hogganaa waraanaa Abdel Fattah Al-Burhan waliin kamiisa kaleessaa dubbachuu fi akka isaan ajaja heeraa fi deemsa ce’umsaa iddotti deebisaniif gaafatan.
Burhan Kamiisa dabree bilbilaan ministeera haajaa alaa Yunaaytid Isteetes Antonii Bliilkan waliin ka dubbatan yoo ta’u,mootummaa hundeessuuf deemsii jiru akka arfachuu qabu Burhaan irratti galuu isaanii, waajirri isaanii ibsee jira.
Ce’uumsii Dimookraatawaan akka barbaachiisu gam lameen kan irratti walii galan yoo ta’u, ijaarsa mootummaa ce’umsaa hundeessuu xumuruu fi, mootummaa ijaaaruuf deemsii jiru akka ariifatuufis walii galan jedha waajirri Burhan.
Burhaan namoota siyaasaa eega fonqoolcha mootummaa as hidhanii jiran battalumatti akka gadhiisan, gara marii mummicha miniseeraa Haamdook waajiratti deebisuu fi bulchiinsa sivilootaa Sudaan keessatti deebisuu irratti marii akka gaggeessaniif Bliinkan bilbilaan Burhaanti himanii jiru.